GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
NA Satọdee, abalị 25 n’ọnwa Eprel, afọ 2015, ajọ ala ọma jijiji kpara ike dị egwu na Nepal, bụ́ obodo dị n’ebe ugwu ma e si India gawa ya. Ala ọma jijiji ahụ mere n’ebe dị ihe dị ka kilomita iri asatọ tupu e ruo Kathmandu, bụ́ isi obodo Nepal. Ọ dị mwute na ihe karịrị 8,500 nwụrụ n’ọdachi ahụ. Ihe a bụ ọdachi na-emere onwe ya kacha taa isi ndị mmadụ na Nepal. O mebisiri ụlọ karịrị 500,000. Ọtụtụ n’ime Ndịàmà Jehova dị 2,200 nọ na Nepal bi n’ebe ahụ ọdachi ahụ mere. Ọ dị mwute na otu nwanna anyị nwaanyị na ụmụ ya abụọ nwụrụ n’ọdachi ahụ.
Otu nwanna nwaanyị aha ya bụ Michelle kwuru, sị: “Ala ọma jijiji ahụ mere mgbe ọgbakọ ndị nọ n’ebe ọ kacha kpaa ike nọ n’ọmụmụ ihe. A sị na o mere mgbe ụmụnna anyị nọ n’ụlọ, ndị gaara anwụ gaara akarị akarị.” Olee ihe mere o nweghị ihe mere ndị ahụ gara ọmụmụ ihe? Ọ bụ n’ihi otú e si rụọ Ụlọ Nzukọ Alaeze ndị dị n’obodo ahụ.
“UGBU A, ANYỊ AHỤLA URU Ọ BARA”
A rụrụ Ụlọ Nzukọ Alaeze ọgbara ọhụrụ ndị e nwere na Nepal otú ọ ga-abụ ala ọma jijiji mee, o nweghị ihe ga-eme ha. Otu nwanna aha ya bụ Man Bahadur so ná ndị rụrụ Ụlọ Nzukọ Alaeze ndị a. Ọ sịrị: “Ndị mmadụ na-ajụkarị anyị ihe mere anyị ji eme ka ntọala Ụlọ Nzukọ Alaeze anyị sie ezigbo ike n’agbanyeghị na ọ bụ obere ụlọ ka anyị na-arụ. Ugbu a, anyị ahụla uru ọ bara.” Mgbe ala ọma jijiji ahụ mechara, e nyere ikike ka ndị mmadụ gbabata n’Ụlọ Nzukọ Alaeze anyị. Mgbe ụmụ obere ala ọma jijiji nọzi na-eme mgbe nke nnukwu ahụ mechara, Ndịàmà Jehova na ndị agbata obi ha nọ n’Ụlọ Nzukọ Alaeze atụghị ụjọ ọ bụla.
Ndịàmà Jehova na ndị agbata obi ha gbabatara n’Ụlọ Nzukọ Alaeze
Ndị okenye ọgbakọ dị iche iche malitere ozugbo chọwa ụmụnna ndị a na-ahụbeghị. Otu nwanna aha ya bụ Babita kwuru, sị: “Mkpa ndị okenye ndị ahụ bụ ka ihe dịrị ụmụnna ha ndị ọzọ ná mma. Ụdị ịhụnanya ha nwere n’ebe anyị nọ metụrụ anyị n’ahụ́.” N’echi ya, mgbe ala ọma jijiji ahụ mechara, mmadụ atọ so na kọmitii na-elekọta ozi ọma Ndiàmà Jehova na Nepal, nakwa ndị na-aga eleta ọgbakọ dị iche iche, bidoro ịna-aga n’ọgbakọ dị iche iche iji mata mkpa ha nakwa iji nyere ndị okenye ha aka.
Nwanna Gary Breaux si n’isi ụlọ ọrụ Ndịàmà Jehova bịa leta ndị ọdachị dakwasịrị
Abalị isii ala ọma jijiji ahụ mechara, nwanna Gary Breaux na nwunye ya bụ́ Ruby si n’isi ụlọ ọrụ Ndịàmà Jehova dị n’Amerịka bịa Nepal. Reuben, onye so na kọmitii ahụ anyị kwuburu okwu ya, sịrị: “N’ihi ọgba aghara a nọ na-enwe na Kathmandu nakwa maka obere ala ọma jijiji nọ na-eme mgbe nke nnukwu ahụ mechara, anyị amaghị ma nwanna Breaux ọ̀ ga-abịalikwa. Ma nwanna Breaux kpebisiri ike na ọ ga-abịa. Ọ bịakwara. Ọbịbịa ya mekwara ụmụnna ndị nọ na Nepal obi ụtọ.”
“O MERE KA ANYỊ NA ỤMỤNNA ANYỊ DỊRỊKWUO N’OTU”
Silas, onye na-arụ n’ọfis Ndịàmà Jehova dị na Nepal kwuru, sị: “Ozugbo e mezichara telefon anyị mebiri emebi, ndị mmadụ malitere ịna-akpọ anyị ehihie na abalị. Ụmụnna anyị nọ n’ebe dị iche iche n’ụwa chọrọ ịma otú anyị mere. Ọ bụ eziokwu na ụfọdụ n’ime ndị ahụ kpọrọ anyị, nọ na-asụ asụsụ anyị na-amaghị, ma anyị ma na ha hụrụ anyị n’anya chọọkwa inyere anyị aka.”
Ụmụnna anyị ndị nọọsụ na ndị dọkịta si Yurop bịa nye aka
Ruo ọtụtụ ụbọchị ala ọma jijiji ahụ mechara, ụmụnna ndị Nepal nọ na-ewetara ndị bi n’Ụlọ Nzukọ Alaeze ahụ ihe oriri. E hiwekwara Kọmitii Na-ahụ Maka Ịgbatara Ndị Ọdachi Dakwasịrị Ọsọ Enyemaka iji nyere ndị nọ ná mkpa aka. O teghị aka, ụmụnna anyị ndị Bangladesh, India, na Japan amalite izite ihe dị iche iche dị ụmụnna anyị mkpa. N’ime abalị ole na ole, ụmụnna anyị ndị nọọsụ na ndị dọkịta si Yurop bịa jiri otu Ụlọ Nzukọ Alaeze mere ebe ha ga-anọ na-elekọta ndị ọrịa. Ha bidoro ọrụ ozugbo, na-elekọta ndị ala ọma jijiji ahụ merụrụ ahụ́, na-agbakwa ha ume.
Otu nwaanyị aha ya bụ Uttara kwuru, sị: “Ọ bụ eziokwu na ala ọma jijiji ahụ kpara ike dị egwu, menyekwa ọtụtụ ndị ụjọ, ma o mere ka anyị na ụmụnna anyị dịrịkwuo n’otu.” Ihe a nwaanyị a kwuru bụ ihe dị ọtụtụ ndị n’obi. N’eziokwu, ala ọma jijiji ahụ emeghị ka ịhụnanya ụmụnna anyị nwere n’ebe Jehova na ụmụnna ha nọ jụọ oyi. Kama, o mere ka o sikwuo ike.
Gụọ ihe a ka ị hụ otú anyị si enyere Ndịàmà Jehova ibe anyị na ndị ọzọ aka ma e nwee ọdachi.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ “Ụdị Ịhụnanya Ha Nwere n’Ebe Anyị Nọ Metụrụ Anyị n’Ahụ́”
IHE BAỊBỤL KWURU Ite Ime
È KERE YA EKE? Ihe Nwa Ahụhụ A Na-akpọ Silver Ant Na-eji Egbochi Okpomọkụ
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere TETA! Gịnị Mere Ndị Na-eto Eto Ji Ada Mbà? Gịnị Ga-enyere Ha Aka?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ TETA! Gịnị Mere Ndị Na-eto Eto Ji Ada Mbà? Gịnị Ga-enyere Ha Aka?
TETA! Gịnị Mere Ndị Na-eto Eto Ji Ada Mbà? Gịnị Ga-enyere Ha Aka?